पहिलो संविधान संशोधन गर्नुनै गलत थियोः एमाले नेता खनाल
NST: बुधवार, ०८:५५ | ९ फाल्गुण, २०७४ | 21st February 2018
काठमाडौ । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पहिलो संविधान संशोधन गर्दानै आफूहरुले गल्ती गरेको बताएका छन् । नेपालवाणी नेटवर्कको वाणी वहसमा पत्रकार राजेन्द्र बानियाँ सँग कुरा गर्दै खनालले वर्षातको मुखैमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न नसके माघ ७ गते भित्र तीन वटा निर्वाचन गर्न नसकिने पनि उल्लेख गरे ।
कुराकानीको सम्पादित अंश ।
स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने की नगर्ने भन्ने कुरामा राजनीति आइपुगेको हो र ?
निर्वाचन अनिवार्य छ भनेर हामीले सुरुदेखिनै भनिरहेका छौँ । यो संविधान कार्यान्व्यन गर्नकालागि निर्वाचन आवश्यक हो । जुनसुकै बेलामा निर्वाचन गरेर हुँदैन । आगामी माघ ७ गते भित्र हामीले ३ वटा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ । अहिले बर्षाको मुखैमा हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सकिएन भने, अरु निर्वाचन माघ ७ गते अघि गर्न सम्भव हुँदैन ।
त्यसैले यो निर्वाचन जसरी पनि गर्नुपर्छ, अहिले आफैमा ढिला हुन लागि सकेको छ । अहिले संविधान संशोधनको लफडा तर्फ लाग्नुहुँदैन । यो रुपान्तरित संसदको काम संविधान संशोधन गर्ने पनि होइन । पहिलो संविधान संशोधन गर्नुनै गलत थियो, अहिले गर्न लागिएको पनि गलत छ । त्यसैले नयाँ जनादेश लिएर आउने संसदले मात्रै संविधान संशोधन गर्नसक्छ ।
भन्न खोजेको संविधान संशोधन गर्ने कुरा असम्भव हो त ?
असम्भव मात्रै होइन, गलत पनि कुुरा हो । यो संविधान बनेर घोषणा गर्ने संविधान सभा विघठन भइसकेको छ । यो रुपान्तरित संसद मात्रै हो । यसले मुलुकको संक्रमणलाई मार्गदर्शन गर्ने मात्रै हो । यो संसदको काम भनेको निर्वाचनकालागि आवश्यक पर्ने ऐन कानुन बनाउने मात्रै हो ।
विगतमा अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला संविधान संशोधन त गरेको हो नी ?
हो, हामीले संविधान संशोधन गरेका हौँ, तर त्यतिबेला हामीले आफै गलत गरेका थियौँ । हामी सबैले के आशयले गलत गरियो भने, एक पटक संविधान संशोधन गरेपछि सर्व स्वीकार्य भइहाल्छ नी भन्ने बुझेका थियौँ, जुन गलत भयो ।
संविधान संशोधन पारित भएन भने त चुनावमा नजाने ÷ भाँड्ने भनेर मोर्चाले भन्दै आएको छ त ?
यो मोर्चाको आफ्नो कुरा हो । संविधानले दिएको अधिकार अनुसार तपाई हामी र राजनीतिक दलहरु हिँड्नु पर्ने हुन्छ । जे मनलाग्यो त्यही गर्छु भन्न कसैलेपनि पाउँदैन । मोर्चाले तलमाथी गर्दा ‘ल एण्ड अर्डर’ को कुरा आउँछ । यदि राज्य छ भने ल एण्ड अर्डरको समस्या समाधान गर्नु पर्यो नी ।
आजको दिनमा अरु एकातिर एमाले अर्को तिर जस्तो देखियो त ?
यस्तो केही होइन, अहिले हामी नौँ वटा पार्टी एकताबद्ध भएर हिँडेका छौँ । र नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका जो देशभक्त हुनुहुन्छ, उहाँहरुले अहिलेको अवस्थामा संविधान संशोधन गर्ने होइन, अहिले कार्यान्व्यन गर्नेृ बेला हो त्यतातर्फ जाँउ भन्दै आउनु भएको छ । आम नेपाली जनता अहिले चाँडो भन्दा चाँडो चुनाव होस भनेर माग गर्दै आएका छन् ।